बाढीपहिरोको बितण्डा सेलाउन नपाउदै गयो ७.१ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, के छ अवस्था — Sanchar Kendra
१किन हटाइँदैछ आइपीओमा १० कित्ताको प्रावधान ?
२विप्लवसँग वार्ता सकिएलगत्तै एकाएक सैनिक मुख्यालय किन पुगे प्रधानमन्त्री ओली ?
३नेकपा स्थायी समिति बैठक सकियो, के भयो निर्णय ?
४पेरिसडाँडामा प्रचण्ड-माधव नेकपाको स्थायी कमिटी बैठक जारी, केन्द्रिय समितिको बैठक कहिले ?
५काँग्रेसले बोलायो संसदीय दलको बैठक
६आज बढ्यो सुनको मूल्य, कतिमा भइरहेको छ कारोबार ?
७सरकार र विप्लव नेकपाबीच पहिलो चरणको वार्ता सकियो, के-के बिषयमा भयो छलफल ?
९नेपालमा नैतिकताको खडेरी पर्यो- माधवकुमार नेपाल
१०विप्लव र सरकारले छुट्टाछुट्टै वार्ता समिति गठन गरेपछि कांग्रेसले के भन्यो ?
११प्रचण्ड-नेपालले केन्द्रीय सदस्यहरुलाई किन दिए यस्तो निर्देशन
१२पूर्वप्रधानमन्त्री भट्टराई स्वदेश फिर्ता
७भागरथी ह’त्या प्र’क’रण- सुदूरपश्चिमका प्रहरी प्रमुखले चाले यस्तो कदम
बाढीपहिरोको बितण्डा सेलाउन नपाउदै गयो ७.१ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प, के छ अवस्था
काठमाडौं । मौसम परिवर्तन भइ मनसून सुरु भएसंगै अहिले देश भित्र अथवा बाहिर भीषण वर्षापछि बाढीपहिरोले बितण्डा मच्चाईरहेका छ । वर्षा पछिको बाढीपहिरो ठुलो जनधनको क्षति गरीरहेका बेला शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । इन्डोनेसियाको पूर्वी मालुकु द्वीपलाई केन्द्रविन्दु बनाएर आइतबार ७.३ म्याग्निच्यूडको शक्तिशाली भूकम्प गएको छ । अमेरिकी भूगर्भ केन्द्रका अनुसार भूकम्प निकै शक्तिशाली भए पनि सुनामीको चेतावनी दिइएको छैन । उत्तर मालुकु प्रान्तको टर्नेट नगरबाट करिब १६५ किलोमिटर टाढा भूकम्प गएकाले जनधनको क्षतिको विवरण आउन बाँकी रहेको इन्डोनेसियाली अधिकारीहरुले बताएका छन् । भूकम्प जमिनको सतहबाट करिब १० किलोमिटर गहिराईमा गएको पनि अमेरिकी भूगर्भ केन्द्रले जनाएको छ ।
अमेरिकाको लुजियानामा भीषण वर्षासँगै आएको आँधीले जनजीवन प्रभावित पारेको छ । प्रतिघंटा १ सय १२ किलोमिटरको गतिमा आएको आँधीले जनजीवन अस्तव्यस्त पारेको हो । आँधीले थप वितन्डा मच्चाउन सक्ने भन्दै स्थानीय प्रशासनले सचेत रहन नागरिकलाई आह्वान गरेको छ । आँधीपछि बाढी आउन सक्ने भन्दै सुरक्षित स्थानमा जान सरकारले आह्वान गरेको हो । १ लाख मानिस सुरक्षित स्थानमा गइरहेको बताइएको छ । आँधी आएपछि त्यहाँका हवाई उडानसमेत बन्द भएका छन् । यसैबीच अमेरिकी राष्ट्रपति डोनल्ड ट्रम्पले लुजियानामा आपतकाल घोषणा गरेका छन् ।
फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना
अमेरिकाको द फेडेरल ट्रेड कमिसन (एफटिसी)ले सामाजिक सञ्जाल फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउने निर्णय गरेको छ । प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत विवरण राजनीतिक स्वार्थका लागि अवैध रुपमा प्रयोग भएकोबारे अनुसन्धान गरिरहेको एफटिसीले फेसबुकलाई ५ अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउनुपर्ने ठहर गरेको हो । फेसबुकका ८ करोड ७० लाखभन्दा बढी प्रयोगकर्ताको जानकारी राजनीतिक परामर्शदाता क्याम्ब्रिज एनालिटिकाले अवैधरुपमा प्राप्त गरी निहित राजनीतिक स्वार्थका लागि प्रयोग गरेको सम्बन्धमा एफटिसीले अनुसन्धान गरिरहेको छ । फेसबुकलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलर जरिवाना तिराउनेसम्बन्धी प्रस्ताव एफटिसीमा ३–२ भोटले पारित भएको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै अमेरिकी सञ्चारमाध्यमले जनाएका छन् ।
यस सम्बन्धमा फेसबुक र एफटिसीले कुनै प्रतिक्रिया दिन नचाहेको बीबीसीले जनाएको छ । एफटिसीले सन् २०१८ को मार्चमा अनुसन्धान सुरु गरेको थियो । अनुसन्धानका क्रममा फेसबुकले सन् २०११ मा भएको सम्झौता उल्लंघन गरे या नगरेको सम्बन्धमा हेरिएको जनाइएको छ । सो सम्झौताअनुसार कुनै पनि प्रयोगकर्ताको व्यक्तिगत जानकारी प्रयोग गर्न सम्बन्धित प्रयोगकर्तालाई जानकारी गराउनुपर्ने र त्यसका लागि सहमति लिनुपर्ने व्यवस्था छ ।
एफटिसीमा फेसबुकका प्रयोगकर्ताको जानकारी अवैध रुपमा प्रयोग भएको सम्बन्धी विषयको अनुसन्धानलाई पाँच अर्ब अमेरिकी डलर तिराएर अन्त्य गर्ने प्रस्तावमा सदस्यबीच विमति भएको दि वाल स्ट्रिट जर्नलले उल्लेख गरेको छ । जरिवानासम्बन्धी प्रस्ताव न्याय विभागको सिभिल डिभिजनले अन्तिम रुप दिनुपर्छ । यसका लागि कति समय लाग्छ भन्ने थाहा नरहेको स्रोतलाई उद्धृत गर्दै सञ्चारमाध्यमहरुले जनाएका छन् । यो जरिवाना सम्बन्धी प्रस्तावले अन्तिम रुपमा पाएमा एफटिसीले कुनै पनि प्रविधिसम्बन्धी कम्पनीलाई लगाएको अहिलेसम्मकै ठूलो जरिवाना हुनेछ ।